दसैंछेका जुर्मुराएको ‘त्यो काठमाडौं’
काठमाडौंमा अन्योल, डर र सशस्त्र क्रान्तिको प्रारम्भ र अनिश्चितता व्याप्त भएको वातावरणबीच राणाशाहीविरोधी सशस्त्र क्रान्ति पनि विभिन्न ठाउँबाट एकैसाथ शुरू भयो । यसमा प्रमुख स्थान वीरगञ्ज थियो ।
उता विराटनगरबाट ‘रेडियो प्रजातन्त्र नेपाल’ नामक रेडियो स्टेशनले काम चालू गरिसकेको थियो । तिनताका काठमाडौं खाल्डोभरिमा घरमा रेडियो हुने मानिसहरूको संख्या २ हजार पनि नाघ्दैनथियो होला । आ–आफ्नो रेडियोमा उपर्युक्त विद्रोही रेडियो स्टेशनको कार्यक्रम सुनेर एकअर्कोसित साउती गर्नेहरूको संख्याचाहिँ कम थिएन । अर्कोतिर ‘नेपाल’मा श्री ३ महाराजको राज कायमै थियो ।
प्रजाहरूमा त्यस्तो मनस्थिति भए पनि अब जमिनबाट मात्र होइन, हावाबाट पनि विद्रोहीहरूको मार खप्नुपरेकाले गर्दा राणा शासनचाहिँ मर्माहत नै भएको थियो । तर, आफ्नो अदव र अनुशासनका कारण राणा शासनले ‘विदेशीहरूको इशारामा नाच्ने विद्रोहीहरू’का सामु आफू दबेको प्रमाण किञ्चित दिएन ।
त्यसले वीरगञ्जलाई पुनःकब्जा गर्न र विराटनगरबाट विद्रोहीहरूलाई ‘लघार्न’ जवाफी फौजी अभियान चलायो । वीरगञ्ज राणा शासनको हातमा फर्कियो पनि । यसले निभ्न लागेको शासनलाई केही समयका लागि बल्ने हौसला दियो । तर, पूर्व–पश्चिम र दक्षिणका मोर्चाहरू झन् सक्रिय भइरहेका थिए र मुक्ति सेनाले एकपछि अर्को विजय हासिल गर्दै गइरहेको थियो ।
यी सबै मोर्चाहरूमा कांग्रेसकै प्रतिबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता सक्रिय थिए । कम्युनिस्टहरूको सहभागिता पनि क्रमिक तर उल्लेखनीय रूपले बढिरहेको थियो । कतिपय क्षेत्रमा त कांग्रेस–कम्युनिस्ट नेतृत्वमा राणाविरोधी आन्दोलनले जमिनदारविरोधी अभियानको रूप समेत लिएको थियो । तमसुक जलाइने घटना पनि धेरै ठाउँमा भए ।
यत्तिकैमा लेखकलाई तिहारपछिको छुट्टी मनाएर फेरि कलकत्ता पढ्न फर्किनु थियो । नेपाल खाल्डोबाट बाहिर जानुपर्दा अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने राहदानीका लागि यस पटक अघिअघिको जस्तो जिम्मा–जमानीले नपुगेर निकै ठूलो ओहदावाल व्यक्तिको सहीछाप गराउनुपरेको थियो ।
विद्यार्थीहरूलाई ‘कांग्रेस’को शंका गरिनु स्वाभाविकै थियो । सधैंको चहलपहलपूर्ण थानकोटफेदी त्यस दिन सुनसान थियो । सामान्य भरियाहरू पनि पाइएनन् । अतः गढीमा भारी–गुन्टा जचाउँदा हाम्रो भरिया त ‘तल्लो जातको छुन नहुने’ मानिस भएको पत्तो लाग्दा हामी झन् ‘कांग्रेस’ ठहरियौं ।
हामीलाई नांगेझार जस्तो पारेर खानतलासी गरियो । कांग्रेस भएको कुनै प्रमाण त फेला परेन तर पनि हामीमाथि अधिकारीहरूको शंका हटेको थिएन । म नाउँ चलेको बाबुको छोरा भएकाले शायद त्यहाँ कोही पनि थुनिनु परेन ।
त्यस दिनका हामीहरूमा ऋषिकेश शाह, नर्सिंहबहादुर श्रेष्ठ, खगेन्द्रबहादुर बस्नेत, पर्लजंग राणा र सूर्यबहादुर थापा आदि लखनौ–अलाहवाद र म कलकत्ता जान सँगसँगै हिँडेका थियौं । साँझ भीमफेदी पुगियो ।
त्यहाँ प्रायः सबै पसलहरू बन्द थिए । रमाइलोसँग चिया–चमेना गर्ने आशा पनि तुहियो । त्यहाँको सन्नाटामा आफ्नै प्रकारको सन्त्रास थियो । भोलिपल्ट बिहान कोचाकोच भरिएको बस चढेर अमलेखगञ्ज जाँदा सहयात्रीहरू सबै निर्जीव प्राणीसरह देखिन्थे ।
वीरगञ्ज फेरि राणाशासनको कब्जामा आएको खबरको विवरण राति धर्मशालामा सबैले सुनिसकेका थिए । बाटोभरि बसमा कसैको मुखबाट अघिअघिको जस्तो बोलीचाली सुनिदैनथ्यो । चुरीमाईको सुरुङ पार गर्दा पनि कुनै सनसनी मच्चिएन । सबै जना त्राहिमाम थिए । आखिर वीरगञ्जमा भयानक काण्ड भएको रहेछ । सबै जनालाई त्यही वीरगञ्ज भएर जानु थियो । कुन्नि के हुने हो ?
रेलगाडी भरिभराउ भएर पनि अमलेखगञ्ज स्टेशन बिरानो नै थियो । गाडी चल्यो । त्यो चल्दाको आवाजबाहेक डिब्बामा अरु आवाज सुनिदैनथ्यो र वीरगञ्ज आइपुगियो ।
सधैं गुलजार रहने, चाडबाडमा जस्तै भीड हुने र नगरवासीहरूका लागि घुम्ने, डुल्ने, मानिस भेट्ने ठाउँको रूपमा प्रख्यात उक्त स्टेशनमा सन्त्रासपूर्ण वातावरण, अनौठो निस्तब्धता छाएको थियो भने ठाउँठाउँमा कडा फौजी पहरा लागेको देखिन्थ्यो । कुनै पनि यात्रु चिया वा पान खानका लागि रेलको डिब्बाबाट तल ओर्लेन । सबै जना रक्सौल पुग्ने चिन्तामै थिए । किन हो कुन्नि, त्यहाँ पुगेपछि मात्र बल्ल सास फेर्न सजिलो होला भन्ने लागिरहेको थियो ।
वीरगञ्ज रेल्वे स्टेशनमा एक घण्टाजतिको विश्रामपछि रक्सौल पुग्दा पो वीरगञ्ज स्टेशनमा त्यस दिन छाएको त्रासपूर्ण वातावरण, अनौठो निस्तब्धता र ठाउँठाउँमा फौजी पहराको वास्तविकता थाहा पाइयो ।
त्यस साँझ त सधैंको जस्तो रक्सौल स्टेशनवारि नै रात बसेर नेपाली होटलमा भात खाने अनि रात कटाउने चलन नगरेर सोझै रक्सौल स्टेशनतिर लागिएको थियो ।
रक्सौलबाट भोलिपल्ट सुगौलीको बाटो गरी पटनाहुँदै कलकत्ता जान लाग्दा रक्सौल स्टेशनमा फेरि भेट भएका क्रान्ति योद्धाहरू वीरगञ्ज गुमेकोमा विक्षिप्त भए तापनि नेपालभरि चारतारे झण्डा फहराउन सकिने विश्वासले ओतप्रोत देखिन्थे ।
राणा शासनको अन्त्य गर्न आन्दोलित काठमाडौं र प्रजातन्त्रको उदय
कम्युनिस्टहरूले २००७ सालको क्रान्तिको समर्थन त गरे, तर नेपाली कांग्रेसको पनि अनवरत रूपले विरोध गरे । यस्तो व्यवहार तिनको तत्कालीन नीतिभित्र पर्दथ्यो । त्यो नीति एकातिर संयुक्त मोर्चाको आह्वान गर्न र अर्कोतिर भण्डाफोरको राजनीति चलाउनमा लक्षित थियो ।
उता, आफ्नो ध्येय र नीतिप्रति विरोध वा विमतिलाई किञ्चित नसहने व्यवहार कांग्रेसी नेतृत्वबाट पनि भइरहेको थियो । यस अपवादलाई छाडेर निर्वासित विदेशी भूमि र देशभित्रका प्रमुख नगरहरूमा राणाविरोधी संघर्ष एकै झण्डाको मुनि नभए पनि संयुक्त रूपमा चाहिँ चलिरहेको थियो ।
सशस्त्र संग्रामका मोर्चाहरूको पूरै नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सम्हालेका थिए भने शान्तिपूर्ण तर जाज्वल्यमान सडक संघर्षका मोर्चाहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू सक्रिय थिए । पछिल्लो मोर्चाका राजनीतिक अभिव्यक्तिहरू सशस्त्र मोर्चाहरूबाट छुटेका गोलीका पर्राहरूभन्दा बढी प्रभावशाली नभए पनि कमचाहिँ निःसन्देह थिएनन् । यसमा काठमाडौं उपत्यकाको राणाविरोधी संघर्षले अग्रणी भूमिका खेलेको थियो ।
राणा शासकहरूले त्यस संघर्षको राप र चापबाट आफ्नो पैतालामुनिको जमिन भतभती पोलेको अनुभव गर्न थालेको कुरा लेखकलाई नरप्रताप थापाले बताएका थिए । राणा शासकहरूसँग नजिक रहेको थापा घरानियाका सदस्य रहेका उनी कलकत्ताको प्रतिष्ठित प्रेसिडेन्सी कलेजमा पढ्थे र त्यस नगरका कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट समूहका मानिसहरूसँग उनको राम्रो सम्पर्क थियो ।
त्यसो त राजा त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा राजनीतिक शरण लिएर दिल्ली प्रस्थान गरेको दिनदेखि नै काठमाडौं प्रचण्ड संघर्षको थलो भइसकेको थियो ।
स्वतःस्फूर्तरूपमा बढेको त्यो जनआन्दोलन आफ्नो व्यापकता र गहनताको दृष्टिबाट असाधारण थियो । त्यसका साथै एउटा कारणबाट चाहिँ त्यो सर्वथा अनुपम एवं अद्वितीय थियो । जब्बर ठानिएको राणा शासनको ‘दुर्भेद्य’ गढ रहेको राजधानीमाथि धावा गर्ने क्रान्तिको फौज वस्तुतः अब्बल श्रेणीका सेनापतिरहित थियो ।
सबैजसो नामी नेताहरू त सशस्त्र मोर्चाको कमाण्ड सम्हाल्नमै व्यस्त थिए तर राजधानीको निर्णायक लडाइँचाहिँ कम अनुभवी, तर उच्च मनोबल भएका क्रान्तिकारी युवकहरूले नै लड्नुपरेको थियो ।
अपवादका रूपमा औंलामा गन्न सकिने वयस्क नेताहरूः जसमा पूर्णबहादुर एम.ए., पूर्णबहादुर ‘मानव’, प्रेमबहादुर कंसाकार, दयावीरसिंह कंसाकार, श्रीमती रेवन्तकुमारी आचार्य, सीतादेवी शर्मा, मंगलादेवी श्रेष्ठ, शम्भुराम श्रेष्ठ, दिवाकर भाजु, सूर्यबहादुर भारद्वाज उल्लेखनीय थिए भने बाँकी सब युवक–युवती त्यस लडाइँमा लामबद्ध हुन पुगेका थिए । यो पनि त्यस आन्दोलनको एउटा विशिष्ट पक्ष थियो ।
दिउँसो जुलुस प्रदर्शन र आमसभा, झ्यालखानबाट टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, चूडाप्रसाद शर्मा, गोविन्दप्रसाद उपाध्याय, खड्गमान सिंह बस्नेत आदि नेताहरूलाई रिहा गराउन टुँडिखेल चौरमा धर्ना र रातिपख राँके जुलुसको आयोजना.....। यस्तो थियो त्यसबेलाको काठमाडौंको राजनीतिक दैनिकी ।
अब त राणा शासनको हातबाट दिनको राज्य मात्र होइन, रातको शासन पनि जान थालिसकेको थियो । राणा शासनले रातिपख ‘तोप पड्कने समय’का रूपमा लगाउने गरेको कफ्र्यूलाई समेत प्रभावहीन तुल्याउँदै काठमाडौंका विभिन्न राजनीतिक विचारधाराका युवकहरू एकै मोर्चा बनाएर टोल रक्षा संघका सदस्यहरूको रूपमा रातरातभरजसो जनजागरण अभियान चलाउँथे ।
उनीहरू यस प्रकार आ–आफ्नो टोलमा राणा प्रतिशोधकामी तत्त्वहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने खुकुरी दलको प्रतिकार गर्ने गर्दथे । प्रजा परिषद्का कर्मठ जिल्ला नेता दिवाकर भाजू र कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता कैलाशराम श्रेष्ठ त्यस अभियानका अग्रणी नेता थिए ।
शासक खलकको थरलाई बहिष्कार गरी आफूलाई ‘सम’ बनाई प्रजातन्त्र स्थापना आन्दोलनमा नाटककार बालकृष्ण तथा कवि जनाद्र्धन पनि संलग्न भएका थिए ।
कात्तिकको अन्तिम सप्ताहदेखि काठमाडौंका सडक–गल्लीहरू विशाल जुलुसहरूले तात्न थाले भने वातावरण ‘राणाशाही मूर्दावाद !’, ‘श्री ५ महाराजाधिराज त्रिभुवन जिन्दावाद !’ र ‘बालक राजा मान्दैनौंं !’ भन्ने नाराहरूले घन्किन थाले ।
यसैबीच मंसिर महिनाको १० गते जुन घटनाहरू काठमाडौंमा भए, तीमध्येको पहिलोले मोहन शम्शेरको शासनलाई लाजमर्नु पारिदियो भने दोस्रोले पूरै राजधानीलाई राणा शासनको विरुद्ध आक्रोशित गराइदियो ।
पहिलो दृश्यावली यस्तो थियो । ‘ग’ श्रेणीका राणाहरू २५–३० जनाको एक जत्थाको जुलुस बनाई राणा सरकारकै विरोध र श्री ५ त्रिभुवनको समर्थनमा नारा लगाउँदै त्रिचन्द्र कलेजतिरबाट दरबार स्कुलतिर गइरहेको थियो । त्यसको नेतृत्व सुप्रसिद्ध कवि एवं नाटककार बालकृष्ण शमशेरले गरेका थिए ।
त्यो जुलुसको पछाडि जनसाधारणको ठूलो भीड थियो । जुलुसवाला राणाहरूलाई समातेर मोटरमा राखी सिंहदरबार लगेपछि राणा शासकहरूले आफ्नो लाजमर्नु क्रोधलाई जनसाधारणमाथि बजारे ।
के बूढो, के जवान, के केटाकेटी, लाठी र डण्डा निर्ममतापूर्वक चल्न थाल्यो । यत्तिकैमा एक जना वृद्ध पुलिस डण्डाको प्रहारबाट ढुन्मुनिदै लडे । उनको मुखबाट रगत निस्कन थाल्यो । उनी असन–भोटाहिटी टोलमै बस्ने न्हुछेरत्न तुलाधर रहेछन् । सोही दिन राति ११ बजेपछि ६३ वर्षीय तुलाधरको देहान्त भयो ।
यस दिनदेखि फागुन ६ गतेसम्म काठमाडौंमा दिनहुँ राणाशाहीविरोधी जुलुस र आमसभा भइरहे । यसरी प्रजातन्त्र ल्याउने राजधानीको वासन्ती बतासको सुगन्ध अब त कलकत्तासम्म मगमगाउन थालिसकेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १८, २०७६, ०७:०१:००
जब जवाहरलाललाई कालो झण्डा देखाउने योजना बन्यो
जेलजीवनका चिसा दिन–रात
पाँच पैसामा एक गिलास चिया !
जुन दिन कांग्रेसले राणाविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको आह्वान गर्यो
विश्वेश्वरदेखि देवकोटासम्मको चिया जक्सन